Hacking ဒုတိယတန်း "Grade3Hacking" စာအုပ်တွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများ - Khit Minnyo
Windows Hacking ဒုတိယတန်း "Grade3Hacking" စာအုပ်တွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများ
Hacking ဒုတိယတန်း "Grade3Hacking" စာအုပ်တွင် ပါဝင်သည့် အကြောင်းအရာများ
by KhitMinnyo on June 28, 2018 in Hacking, Hacking Knowledge, Hacking Techniques, Kali, Windows
စာအုပျ အရှမေ့ကျြနှာဖုံးပုံ ဖွဈပါသညျ။
Hacking ကို အခွခေံမှစပွီး အဆငျ့ဆငျ့ လလေ့ာလိုသူတှအေတှကျ
ကြှနျတေျာ့ရဲ့ "Hacking ဒုတိယတနျး" စာအုပျကလေးကို
CHAPTER 1: Pen-Test Machine Install ပွုလုပျခွငျး
Sr# Description Page
1.1. Kali Linux ကို Install ပွုလုပျခွငျး
CHAPTER 2: လကေ့ငျြ့ရေးကှငျး တညျဆောကျခွငျး
2.1. လကျတှလေ့ကေ့ငျြ့ရနျအတှကျ တရားဝငျ Lab တညျဆောကျခွငျး
CHAPTER 3: သိမှတျထားသငျ့သော Terminal Command မြားနှငျ့ Bash Shell အကွောငျး
3.1. အသုံးဝငျသော Linux command မြားကို လလေ့ာခွငျး
3.2. Kali Linux မှာရှိတဲ့ Service မြားအကွောငျး
3.3. Service Management အကွောငျး
3.4. Service Boot Persistence
3.5. Bash Shell
3.5.1. Basic Knowledge for Bash Shell
3.5.2 ပထမဆုံး Bash Program ဖနျတီးခွငျး
3.5.3 ဒုတိယမွောကျ Bash Program
3.5.4. တတိယမွောကျ Bash Program
3.6. Grep အကွောငျး
3.7. Domain နှငျ့ Sub=Domain IP မြားရှာဖှခွေငျး နှငျ့ Bash Script
3.8. Network အတှငျးရှိ Live Host IP မြားကို ရှာဖှခွေငျး
CHAPTER 4: Penetration-Testing အတှကျ လိုအပျသော Tool မြား
4.1. Kali Linux ကို Install ပွုလုပျခွငျး
4.1.2. TCP & UDP Port မြားနှငျ့ ခြိတျဆကျခွငျး
4.3. NetCat နှငျ့ ဖိုငျမြား ပေးပို့သယျယူခွငျး
4.4. NetCat နှငျ့ အဝေးမှထိနျးခြုပျဆကျသှယျခွငျး
4.5. Reverse Shell Access ပေးပို့ဆကျသှယျခွငျး
4.8. TCP Dump
CHAPTER 5: အခကျြအလကျရှာဖှစေုဆောငျးခွငျး
5.1. Passive Information Gathering
5.2. Web ကနေ အခကျြအလကျရှာဖှခွေငျး
5.3. Google နှငျ့ စတငျရှာဖှခွေငျး
5.4. Email စုဆောငျးယူခွငျး
5.5. Netcraft ကနေ အခကျြအလကျရယူခွငျး
5.6. Sublist3r ကို အသုံးပွုရှာဖှခွေငျး
5.7. WHOIS Enumeration
5.8. Recon-ng ကို လလေ့ာခွငျး
5.8.1. Recon-ng Tutorial
5.8.2. Recon-ng Modules
5.9. Active Information Gathering
5.10. Forward Lookup Brute-force
5.11. Reverse Lookup Brute-force
5.12. DNS Zone Transfer
5.13. DNS Recon
5.14. DNS Enum
CHAPTER 6: လကျတှေ့ Scan ပွုလုပျခွငျး
6.1. Port မြားကို Scan ခွငျး
6.2. ခြိတျဆကျ Scan ဖတျခွငျး
6.3. SYN Scanning သို့မဟုတျ Stealth Scanning
6.4. UDP Scanning
6.5. Nmap နဲ့ Scan ဖတျခွငျး
6.6. Traffic ပမာဏကို တှကျဆကွညျ့ခွငျး
6.7. Network Sweeping
6.8. OS Fingerprinting
6.9. Banner Grabbing & Service Enumeration
6.10. Nmap Scripting Engine (NSE)
6.11. SMB Enumeration
6.12. Net BIOS Service ကို Scan ဖတျခွငျး
6.13. Null Session Enumeration
6.14. Nmap SMB NSE Scripts
6.15. SMTP Enumeration
6.16. SNMP Enumeration
CHAPTER 7: အားနညျးခကျြမြား ရှာဖှသေတျမှတျခွငျး
7.1. Vulnerabilities Scanning
7.2. Nmap ကို အသုံးပွုပွီး Vulnerabilities ရှာဖှခွေငျး
7.3. Open VAS ကို သုံးကွညျ့ခွငျး
CHAPTER 8: Buffer Overflow
8.1. Buffer Overflow မိတျဆကျ
8.2. DEP & ASLR
8.3. Buffer Overflow Exploit
8.4. Buffer Overflow (နမူနာ ၂)
8.5. Buffer Overflow (နမူနာ ၃)
8.6. Shell ရယူခွငျး
CHAPTER 9: Exploit မြားနှငျ့ လုပျဆောငျခွငျး
9.1. Exploit မြားနှငျ့ မိတျဆကျခွငျး
9.2. Kali မှာရှိတဲ့ Exploit မြားကို ရှာဖှခွေငျး
9.3. အငျတာနကျမှတဈဆငျ့ Exploit ရှာဖှခွေငျး
9.4. Exploit မြားကို စိတျကွိုကျပွငျဆငျခွငျး
9.5. Exploit အတှကျ Development Environment တညျဆောကျခွငျး
9.6. Exploit Code Language မြား
9.7. Shell Code မြားကို ပွုပွငျခွငျး
9.7.1. Exploit-db 643.c
9.7.2. Exploit-db 646.c
CHAPTER 10: ဖိုငျမြားပေးပို့ခွငျး
10.2. Anti-Virus မြားနှငျ့တှဆေုံ့ခွငျး
10.3. အပွနျအလှနျသကျရောကျမှုမရှိသော Shell မြား
10.4. TFTP နှငျ့ ဖိုငျမြားတငျပို့ခွငျး
10.5. FTP ကိုသုံးပွီး ဖိုငျမြား Upload တငျပို့ခွငျး
10.6. Scripting Language မြားသုံးပွီး File Upload တငျပို့ခွငျး
10.6.1. VBS Script ဖွငျ့ File Upload ပွုလုပျခွငျး
10.6.2. PowerShell ဖွငျ့ File Upload ပွုလုပျခွငျး
10.7. Debug သုံးပွီး ဖိုငျမြားကူးပွောငျးခွငျး
CHAPTER 11: လုပျပိုငျခှငျ့ တိုးမွှငျ့ရယူခွငျး
11.1. Privilege Escalation ဆိုတာ
11.2. Linux မှာ Local Privilege Escalation Exploit အသုံးပွုခွငျး
CHAPTER 12: Client-Side Attack
12.1. Client-Side Attack ဆိုတာ
12.2. Passive Client Information Gathering
12.3. Active Client Information Gathering
12.4. Social Engineering & Client Side Attack
12.6. Client-Side Exploit တညျဆောကျခွငျး
12.6. Java Signed Applet Attack
CHAPTER 13: Web Application Attack မြားအကွောငျး
13.1. Web Application Attack မိတျဆကျ
13.2. Cross Site Scripting (XSS)
13.3. Reflected XSS attack
13.4. Attacking Session Cookie
13.5. Persistence XSS (or) Stored XSS
13.6. လိပျစာပွောငျးညှနျခွငျးနှငျ့ iFrame ထညျ့သှငျးခွငျး
13.7. Cookie မြားနှငျ့ Session Information မြားကို ခိုးယူခွငျး
13.8. Fule Inclusion Vulnerabilities
13.9. Local File Inclusion (LFI)
13.10. Contamination Log File
13.11. LFI မှ Code Execution သို့
13.12. Remote File Inclusion (RFI)
13.13. MySQL နှငျ့ SQL Injection
13.13.1.SQL Injection in DVWA (Low Level Security)
13.13.2.SQL Injection in DVWA (Medium Level Security) & Burp Suite Beginning
13.13.3.SQL Injection in DVWA (High Level Security)
13.13.4.Blind SQL Injection & SQL Map
CHAPTER 14: Password Attack မြားကို လလေ့ာခွငျး
14.1. Brute-force Attack အတှကျ ပွငျဆငျခွငျး
14.1.1. Password Dictionary File ဆိုတာ
14.1.2. Key-space Brute-force
14.2. Pwdump နှငျ့ Fgdump အကွောငျး
14.3. Windows Credential Editor(WCE)
14.14. John, The Ripper
14.5. Password Profiling
CHAPTER 15: Online Password Attack မြားနှငျ့ Password Cracking Tool မြားအကွောငျး
15.1. Online Password Attack ဟူသညျ
15.2. Hydra ကို လလေ့ာခွငျး
15.3. Medusa ကို လလေ့ာခွငျး
15.4. သတိထားရမယျ့ Account Lookup နဲ့ Log Alert မြားအကွောငျး
15.5. မှနျကနျသော Protocol ရှေးခယျြခွငျး
15.6. Password Hashes Attack မြားအကွောငျး
15.7. Password Cracking
15.7. Rainbow Table မြားကိုလလေ့ာခွငျး
CHAPTER 16: Port Redirecting & Tulleling
16.1. Port Redirect နဲ့ Tunnel အကွောငျး
16.2. Port Forwarding / Redirecting
16.3. SSH Tunneling အကွောငျး
16.3.1. Local Port Forwarding
16.3.2. Remote Port Forwarding
16.4. Dynamic Port Forwarding
16.5. HTTP Tunneling
CHAPTER 17: Metasploit Framework ကို လလေ့ာခွငျး
17.1. Metasploit Framework
17.2. User Interfaces
17.3. MSF Syntax မြားကို လလေ့ာခွငျး
17.3.1. Auxiliary Modules
17.4. FTP Brute-force
17.5. Metasploit Database Access
17.6. Exploit Modules
17.7. Metasploit Payloads
17.7.1. Staged & Non-Staged Payloads
17.7.2. Meterpreter Payloads
17.7.3. Meterpreter Command မြားကို လလေ့ာခွငျး
CHAPTER 18: Anti-Virus မြားကို ကြျောဖွတျခွငျး နှငျ့ VIM
18.1. Anti-Virus ဟူသညျ
18.2. Payload ကို Encode ပွုလုပျခွငျး
18.3. VIM ကို လလေ့ာခွငျး
CHAPTER 19: Android Hacking
19.2. ဥပမာ -၁ (Local Area Network)
19.3. ဥပမာ -၂ (Wide Area Network)
19.4. ဥပမာ -၃
CHAPTER 20: နိဂုံးခြုပျဆှေးနှေးခွငျး
20.1. အခကျြအလကျ စုဆောငျးရယူခွငျး
20.2. Scan ပွုလုပျခွငျး
20.3. Exploit ပွုလုပျခွငျး
20.4. Privilege Escalation နှငျ့ Backdoor ထညျ့သှငျးခွငျး
20.5. VPN အသုံးပွုခွငျး
Grade3Hacking “Hacking ဒုတိယတနျး” စာအုပျအတှကျ ကမျြးကိုးစာရငျး
စာမကျြနှာ ၄၃၀ ခနျ့ ပါရှိပွီး
7.5" x 10" အရှယျဖွဈပါသညျ
စာအုပ် အရှေ့မျက်နှာဖုံးပုံ ဖြစ်ပါသည်။
Hacking ကို အခြေခံမှစပြီး အဆင့်ဆင့် လေ့လာလိုသူတွေအတွက်
ကျွန်တော့်ရဲ့ "Hacking ဒုတိယတန်း" စာအုပ်ကလေးကို
CHAPTER 1: Pen-Test Machine Install ပြုလုပ်ခြင်း
1.1. Kali Linux ကို Install ပြုလုပ်ခြင်း
CHAPTER 2: လေ့ကျင့်ရေးကွင်း တည်ဆောက်ခြင်း
2.1. လက်တွေ့လေ့ကျင့်ရန်အတွက် တရားဝင် Lab တည်ဆောက်ခြင်း
CHAPTER 3: သိမှတ်ထားသင့်သော Terminal Command များနှင့် Bash Shell အကြောင်း
3.1. အသုံးဝင်သော Linux command များကို လေ့လာခြင်း
3.2. Kali Linux မှာရှိတဲ့ Service များအကြောင်း
3.3. Service Management အကြောင်း
3.5.2 ပထမဆုံး Bash Program ဖန်တီးခြင်း
3.5.3 ဒုတိယမြောက် Bash Program
3.5.4. တတိယမြောက် Bash Program
3.6. Grep အကြောင်း
3.7. Domain နှင့် Sub=Domain IP များရှာဖွေခြင်း နှင့် Bash Script
3.8. Network အတွင်းရှိ Live Host IP များကို ရှာဖွေခြင်း
CHAPTER 4: Penetration-Testing အတွက် လိုအပ်သော Tool များ
4.1. Kali Linux ကို Install ပြုလုပ်ခြင်း
4.1.2. TCP & UDP Port များနှင့် ချိတ်ဆက်ခြင်း
4.3. NetCat နှင့် ဖိုင်များ ပေးပို့သယ်ယူခြင်း
4.4. NetCat နှင့် အဝေးမှထိန်းချုပ်ဆက်သွယ်ခြင်း
4.5. Reverse Shell Access ပေးပို့ဆက်သွယ်ခြင်း
CHAPTER 5: အချက်အလက်ရှာဖွေစုဆောင်းခြင်း
5.2. Web ကနေ အချက်အလက်ရှာဖွေခြင်း
5.3. Google နှင့် စတင်ရှာဖွေခြင်း
5.4. Email စုဆောင်းယူခြင်း
5.5. Netcraft ကနေ အချက်အလက်ရယူခြင်း
5.6. Sublist3r ကို အသုံးပြုရှာဖွေခြင်း
5.8. Recon-ng ကို လေ့လာခြင်း
CHAPTER 6: လက်တွေ့ Scan ပြုလုပ်ခြင်း
6.1. Port များကို Scan ခြင်း
6.2. ချိတ်ဆက် Scan ဖတ်ခြင်း
6.3. SYN Scanning သို့မဟုတ် Stealth Scanning
6.5. Nmap နဲ့ Scan ဖတ်ခြင်း
6.6. Traffic ပမာဏကို တွက်ဆကြည့်ခြင်း
6.12. Net BIOS Service ကို Scan ဖတ်ခြင်း
CHAPTER 7: အားနည်းချက်များ ရှာဖွေသတ်မှတ်ခြင်း
7.2. Nmap ကို အသုံးပြုပြီး Vulnerabilities ရှာဖွေခြင်း
7.3. Open VAS ကို သုံးကြည့်ခြင်း
8.1. Buffer Overflow မိတ်ဆက်
8.6. Shell ရယူခြင်း
CHAPTER 9: Exploit များနှင့် လုပ်ဆောင်ခြင်း
9.1. Exploit များနှင့် မိတ်ဆက်ခြင်း
9.2. Kali မှာရှိတဲ့ Exploit များကို ရှာဖွေခြင်း
9.3. အင်တာနက်မှတစ်ဆင့် Exploit ရှာဖွေခြင်း
9.4. Exploit များကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ခြင်း
9.5. Exploit အတွက် Development Environment တည်ဆောက်ခြင်း
9.6. Exploit Code Language များ
9.7. Shell Code များကို ပြုပြင်ခြင်း
CHAPTER 10: ဖိုင်များပေးပို့ခြင်း
10.2. Anti-Virus များနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း
10.3. အပြန်အလှန်သက်ရောက်မှုမရှိသော Shell များ
10.4. TFTP နှင့် ဖိုင်များတင်ပို့ခြင်း
10.5. FTP ကိုသုံးပြီး ဖိုင်များ Upload တင်ပို့ခြင်း
10.6. Scripting Language များသုံးပြီး File Upload တင်ပို့ခြင်း
10.6.1. VBS Script ဖြင့် File Upload ပြုလုပ်ခြင်း
10.6.2. PowerShell ဖြင့် File Upload ပြုလုပ်ခြင်း
10.7. Debug သုံးပြီး ဖိုင်များကူးပြောင်းခြင်း
CHAPTER 11: လုပ်ပိုင်ခွင့် တိုးမြှင့်ရယူခြင်း
11.2. Linux မှာ Local Privilege Escalation Exploit အသုံးပြုခြင်း
12.6. Client-Side Exploit တည်ဆောက်ခြင်း
CHAPTER 13: Web Application Attack များအကြောင်း
13.1. Web Application Attack မိတ်ဆက်
13.6. လိပ်စာပြောင်းညွှန်ခြင်းနှင့် iFrame ထည့်သွင်းခြင်း
13.7. Cookie များနှင့် Session Information များကို ခိုးယူခြင်း
13.11. LFI မှ Code Execution သို့
13.13. MySQL နှင့် SQL Injection
CHAPTER 14: Password Attack များကို လေ့လာခြင်း
14.1. Brute-force Attack အတွက် ပြင်ဆင်ခြင်း
14.2. Pwdump နှင့် Fgdump အကြောင်း
CHAPTER 15: Online Password Attack များနှင့် Password Cracking Tool များအကြောင်း
15.1. Online Password Attack ဟူသည်
15.2. Hydra ကို လေ့လာခြင်း
15.3. Medusa ကို လေ့လာခြင်း
15.4. သတိထားရမယ့် Account Lookup နဲ့ Log Alert များအကြောင်း
15.5. မှန်ကန်သော Protocol ရွေးချယ်ခြင်း
15.6. Password Hashes Attack များအကြောင်း
15.7. Rainbow Table များကိုလေ့လာခြင်း
16.1. Port Redirect နဲ့ Tunnel အကြောင်း
16.3. SSH Tunneling အကြောင်း
CHAPTER 17: Metasploit Framework ကို လေ့လာခြင်း
17.3. MSF Syntax များကို လေ့လာခြင်း
17.7.3. Meterpreter Command များကို လေ့လာခြင်း
CHAPTER 18: Anti-Virus များကို ကျော်ဖြတ်ခြင်း နှင့် VIM
18.1. Anti-Virus ဟူသည်
18.2. Payload ကို Encode ပြုလုပ်ခြင်း
18.3. VIM ကို လေ့လာခြင်း
CHAPTER 20: နိဂုံးချုပ်ဆွေးနွေးခြင်း
20.1. အချက်အလက် စုဆောင်းရယူခြင်း
20.2. Scan ပြုလုပ်ခြင်း
20.3. Exploit ပြုလုပ်ခြင်း
20.4. Privilege Escalation နှင့် Backdoor ထည့်သွင်းခြင်း
20.5. VPN အသုံးပြုခြင်း
Grade3Hacking “Hacking ဒုတိယတန်း” စာအုပ်အတွက် ကျမ်းကိုးစာရင်း
စာမျက်နှာ ၄၃၀ ခန့် ပါရှိပြီး
7.5" x 10" အရွယ်ဖြစ်ပါသည်
By KhitMinnyo on June 28, 2018
Labels: Hacking, Hacking Knowledge, Hacking Techniques, Kali, Windows